नायिक रिमा विश्वकर्माको डिभोर्स – Enepal Khabar
नायिक रिमा विश्वकर्माको डिभोर्स
किन हुन्छ सेलिब्रेटिको बैबाहिक जीवन असफल ?
नेपालका चर्चित सेलीवे्रटिहरुको वैबाहिक जिवन दरारमा आउने त सामान्य जस्तो छ । केहि समय अघि चर्चित गायिका मिलन अमात्यको बैबाहिक जीवनमा पुर्ण विराम लाग्यो । रेखा थापा,अन्जु पन्त लगायतका कलाकारले पनि डिभोर्स गरेका थिए ।,त्यस्तै अर्कि सेलिबे्रटी नायिक रिमा विश्वकर्माले पनि आफ्नो बैबाहिक जीवन टुँगिएको छ । धरान स्थित रोबर्ट विश्वकर्मा सँग दुइ बर्ष अगाडि विवाह बन्धनमा बाधिएकी नायिका बिकले गत शाता कानुनी रुपमा रोबर्टसँग डिभोर्स गरेको बुझिएको छ ।
रोबर्ट बेलायमा बस्दै आएका थिए । रोबर्ट गत शुक्रबार बर्षा रसाइलीसँग इन्गेजमेन्ट गरेपछि उनीहरुको डिभोर्स भएको पुस्टि भएको हो । नेपाली रँगमन्चमा सक्रिय रिमा र रोबर्ट बीच सामाजिक सन्जालबाट भेट भएको थियो । सामाजिक सँजालबाट भेट भएर पारिवारिक सहमतीमा विवाह भएपनि दुइ बर्ष मै सम्बन्धमा पुर्ण विराम लागेको हो ।
कहिलेकाहि रिमा बेलायत भेट्न जान्थिन तर उनीहरुबीच के कारणले मनमुटाव आयो भन्ने बारेमा चाहि कुनै कारण बाहिरा आएको छैन । नेपाल आइडलमा रिमा व्यस्त भएपछि उनीहरुबीचको सम्बन्धमा दरार आएको भनेर पनि भनिएको छ । तर यसबारेमा नाियक रिमाले कुनै प्रतिक्रिया दिएकी छैनन् ।
किन हुन्छ सेलिबे्रटिको बैबाहिक जीवन धरापमा
अन्जु पन्त र मनोजराज होस यात,रेखा थापा र छविराज । मिलन अमात्य देखि रिमा सम्म । धेरै गायिक गायिका र नायक नायिकाको वैबाहिक सम्बन्ध धरापमा पर्छ ।सबैका आइडल बनेका सेलिबे्रटिहरुको बैबाहिक सम्बन्धमा असफलताले उनीहरुको सफल जिवनलाइ चुनौति दिन्छ । यसले समग्र समाजपनि नराम्रो छाप छाडेको छ ।
धेरै जनाका उदाहरणीय पात्रहरु बैबाहिक र पारिवारीक रुपमा पनि सफल हुनुपर्ने हो तर धेरै कलाकारहरु बाहिर झकिझकाउ र भित्र टउटकाउ भन्ने अवस्थामा छन । केहि सम्बन्धहरु बाहिर आउछन् र सबैले थाहा पाउछन् तर धेरै घटनाहरु अझै बाहिर आउन पाउदैनन् । सेलिबे्रटिहरुको जब एउटा उचाइमा पुग्छन. उनीहरुको व्यवस्तता बढ्छ । हरेक बैबाहिक जोडि एकअर्काको अधिनमा बस्न चाहन्छन् तर सेलिब्रेटिहरु आफ्नो पार्टनरलाइ भन्दा पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा बढि खटिनुपर्ने हुँदा समस्या सुरु हुन्छ ।
धेरै जना सँग भेटघाट र उठबस हुने हुँदा पार्टनरको नजरमा अनेकौ खालका सँका उपसँका उत्पन्न हुन्छन् । सेलिब्रेटि बनिसकेका धेरैमा घमण्डको पारो चढ्छ । आफ्नो हाइट बढेसँगै सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तिलाइ पनि सम्मान गर्न उनीहरुले चाहदैनन् ।जब दुइ जना बीचको प्रख्यातिके उचाइमा फरक पर्छ त्यसपछि सम्बन्धमा चिसो पस्छ । सबै गायक,नायक तथा रँगकर्मिले आफ्नो पारिवारिक सम्बन्धलाइ पनि उदाहरणीय बनाउनका लागि कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसको प्रत्यक्ष सामान्य मान्छेको जीवनमा पनि पर्छ ।
२६ मंसिर २०७४, मंगलवार १५:२९ मा प्रकाशित